निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड – cmprachanda.com
निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्छः अध्यक्ष प्रचण्ड
२०७५ पौष २५ गते १७:३५ मा प्रकाशित
चितवन । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीच नङ र मासुको सम्बन्ध हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । नारायणगढमा बुधबार आयोजित १२ औं चितवन महोत्सवको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
अध्यक्षले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक द्वन्द्व र भ्रमको समापन भएको छ । राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति बलियो सरकारको स्थापना भएको छ । अबको राज्य समाजवाद उन्मुख राज्य हुनेछ भनेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारको व्यवस्था गरेपछि विकासको मोडेलबारे समस्या बाँकी छैन । मिलेर विकासका लागि काम गर्दा समस्या आउँदैन ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनमा बाटो बनाउन, पर्यटनको विकास गन, पाँच वर्षभित्र सबै बाटो पिच गरिसक्न, रोजगारी सृष्टि गर्न, मेडिकल सिटी बनाउन केन्द्र सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो । निजी क्षेत्रलाई उत्साहित नपारेसम्म समृद्धिको सपना पूरा हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यको आवश्यकतामाथि जोड दिनुभयो ।
चितवन जिल्ला सिंगै राष्ट्रको केन्द्र बन्न सक्ने बताउनुहुँदै जिल्लाको विकास राष्ट्रको विकाससँग सम्बन्धित रहेको उहाँको भनाई थियो । ‘चितवनमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रबीचको सहकार्य सिंगो राष्ट्रको सहकार्यसँग सम्बन्धित छ । चितवनको एकता सिंगो देशको एकतासँग जोडिएको छ । अब विकास र समृद्धिको यात्रामा देशलाई डो-याउन निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक छ, उहाँले भन्नुभयो ।’
चितवनलाई एकीकृतरुपमा छिटोभन्दा छिटो कसरी विकास गर्ने ? कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटनको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय समेटेर समग्र चितवनको विकासका लागि गुरुयोजना आवश्यक रहेको उहाँको धारणा थियो । चितवन जिल्लालाई भौगोलिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक दृष्टिकोणले सिंगो राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने हैसियत भएको जिल्ला बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले चितवनले एकतावद्ध भएर विकासमा फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
‘कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यमा गुणात्मक ढंगले विकास गर्न सकिन्छ । अझै अगाडि बढ्न सम्भव छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषिमा विश्वकै अब्बल देश इजरायल चितवनलाई कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न तयार छ । प्रचण्डको बारेमा विश्वलाई विभिन्न कोणबाट जानकारी छ । चितवनको विकासमा विश्वका विभिन्न देशको सहयोग लिने अवसर छ हामीसँग । हामीलाई इतिहासले, भूगोलले चितवन जिल्लालाई विकसित बनाउन अग्रणी भूमिका दिएको छ । त्यो भूमिकामा तपाईं हामी छौं । राष्ट्रको निम्ति योगदान गरौं ।’
चीनका नेता तेङ स्यायो पिङले ‘बिरालोको मुख्य काम मुसा मार्ने हो, बिरालो कालो होस् वा सेतो केही फरक पर्दैन’ भनेको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘विकासको सन्दर्भमा भनिएको यो भनाइको अर्थ विकास हुनु प-यो, जसले गरेपनि हुन्छ भन्ने हो । विकास निजी क्षेत्रले गरेपनि हुन्छ, सार्वजनिक क्षेत्रले गरेपनि हुन्छ । हामीलाई पनि बिरालो सेतो होस् वा कालो केही मतलब छैन । हुनु प-यो विकास । देशको लागि हामी सबैले ठूलो जिम्मेवारी लिनु छ । अब दश वर्ष समृद्धिको निम्ति काम गरेर माथि जाने विचार छ ।’
अधयक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चितवन महोत्सवको उद्घाटन समारोहमा आउन नसक्नुको कारण बताउँदै भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीजीलाई चितवन महोत्सवको प्रमुख अतिथिको रुपमा ल्याउन चाहेको थिएँ । उहाँ निर्वाचनपछि चितवन आउनु भएको पनि छैन । मैले प्रधानमन्त्रीजीले सुरुमा स्वीकार पनि गर्नुभएको थियो । अन्य कार्यक्रमको चापले गर्दा आउन सक्नु भएन । स्वास्थ्यका कारणले नआउनु भएको होइन । दुई वटा अध्यक्ष किन जानु प¥यो ? तपाईं नै जानुहोस् भनेर मलाई नै अघि सार्नुभयो । उहाँले मेरोतर्फबाट पनि सफलताको शुभकामना सुनाइदिनु होस् भन्नु भएको छ ।’
महोत्सव उद्घाटनपूर्व आयोजित शोभायात्राको पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले बेलुन उडाएर उद्घाटन गर्नु भएको थियो । महोत्सव परिसरबाट शुरु भएको शोभायात्राले नारायणगढ बजार परिक्रमा गरेको थियो । शोभायात्रामा विभिन्न संघसंस्थाको सहभागिता रहेको थियो । दुई वर्षको अन्तरालमा आयोजना हुँदै आएको चितवन महोत्सवको आयोजक उद्योग वाणिज्य संघ चितवन र सहआयोजक भरतपुर महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति रहेका छन् ।
माघ ४ गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सञ्चार, ऊर्जा लगायतका विषयमा विज्ञ झिकाएर राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी आयोजना हुने आयोजकको भनाइ छ । महोत्सवमा व्यावसायिक, कृषि प्रवद्र्धन, सूचना प्रविधि, हस्तकला, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अटोमोवाइल्स, सामाजिक संस्था लगायतका पाँच सय ७० वटा स्टल रहेका छन् ।
सत्तरी वर्ष पछिको राजनीतिक स्थायित्वको वातावरण राष्ट्रिय सहमतिका कारणः अध्यक्ष प्रचण्ड
By cmprachanda	 Jan 09, 2019